Xiaomi Mi A2: sivana ireo kinova sy loko fandefasana azy | Androidsis
Sivana ireo kinova isan-karazany amin'ny Xiaomi Mi A2
Ny fahatongavan'i Xiaomi Mi A2 dia manakaiky kokoa. Afaka tapa-bolana dia antenaina fa hisy ny fampisehoana ofisialy ny finday Android One vaovao an'ny orinasa. Tsy mahagaga ny famaritana ny fitaovana, satria hiorina amin'ny Mi 6X izy io. Ka efa fantatsika nandritra ny volana maro ireo andinin-teny ireo. Ankehitriny, voamarina fa ho maro ny kinova amin'ny telefaona.
Ho kinova isan-karazany miankina amin'ny RAM sy fitehirizana anatiny. Amin'izay ny mpampiasa liana amin'ny Xiaomi Mi A2 dia ho afaka hisafidy izay mety indrindra amin'izy ireo. Inona avy ireo kinova azontsika jerena amin'ny telefaona marika?
Ny kinova rehetra dia antenaina hamidy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena., any Espana dia voamarina ny fandefasana azy. Na dia tsy maintsy miandry ny fampisehoana ny telefaona aza isika hahafantatra tsara. Inona ny kinova Xiaomi Mi A2 ho hita tsy ho ela?
RAM 4 GB sy fitehirizana anatiny 32 GB
RAM 4 GB sy fitehirizana anatiny 64 GB
RAM 4 GB sy fitehirizana anatiny 128 GB
RAM 6 GB sy fitehirizana anatiny 128 GB
Ireo mpampiasa izay liana amin'ity maodely ity amin'ny Android One dia afaka misafidy amin'ireo andiany ireo. Betsaka ny kinova noho ny maodely amin'ny taona amidy. Ka mety kokoa amin'izay mety ho tian'ny mpampiasa izy ireo. Ary antenaina ihany koa fa hisy loko isan-karazany eny an-tsena. Afaka manantena an'izany isika ny Xiaomi Mi A2 dia hanomboka amin'ny manga, volamena ary mainty.
Ireo loko telo ireo dia ho hita any Espana rehefa alefa ny telefaona. Tsikelikely dia efa manana antsipiriany manokana momba ny fahatongavan'ity telefaona vaovao eny an-tsena ity isika. Afaka tapa-bolana dia ho afaka hahafantatra azy amin'ny fomba ofisialy isika. Ahoana ny hevitrao momba ny Xiaomi Mi A2?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Sivana ireo kinova isan-karazany amin'ny Xiaomi Mi A2
Samsung manokatra orinasa mpamokatra telefaona lehibe indrindra manerantany
Xiaomi dia hanokatra fivarotana vaovao any Valencia sy La Coruña